Baga nagaan galate goota Oromoo!Sirna Simannaa Artist Umar Suleymaan – Kichuu
HomePhoto GalleryBaga nagaan galate goota Oromoo!Sirna Simannaa Artist Umar Suleymaan
Baga nagaan galate goota Oromoo!Sirna Simannaa Artist Umar Suleymaan –
Waa’ee Umar Suleymaan yeroon yaadu qalbiidhaan bara 1990oottaattin gale. Artiistonni Oromoo bara 1990oota keessa rasaasa ta’anii diina waadaa turan hedduu dha. Wayta diinni ummata keenya abdii kuchiisuuf hojjechaa turetti dhaaba qabsoo bakka bu’anii qabsoo irratti qorqalbiidhaan ummata hidhachiisaa turan. Of qusannoo fi sodaa tokko malee diina waadan. Hunda keessaa garuu jarri armaan gadii kun wareegama addaa baasan. Dinagdee fi waan biraa hunda cinaatti dhiisanii 100% dhimma qabsoo qofaaf of wareeguu filatan. Kaaseeta maxxansan guutuu dhimma qabsoo qofaaf kennanii lallaban. Isaan kun eenyu?
1. Umar Suleymaan
2. Ilfinesh Qannoo
3. Zarihun Wadaajoo
4. Osmaayyoo Muusaa (kanumarratti wareegame)
5. Eebbisaa Addunyaa (kanumarratti wareegame)
Biyya ala irraa ammoo,
6. Nuhoo Goobanaa ti.
Kennaa Zarihuun Wadaajoo Umar suleeman kenne
#Umar Suleeymaan fi #Zarihun Wadaajoo,
Oolmaa uummata Oromoof ooltaniif dhaloonni kun isin galateeffanna!
OMN: Sirna Simannaa Artist Umar Suleymaan – BOOLEE (Amajjii 13, 2019)
Anaa dhufu jennee
Kottu goota keenyaa
Ati kan dhuunfaa miti
Qabsoo sabaaf jettee
Maatii kee…fira kee
Jireenya kee gattee….
#Umar abbaa xiiqii
Hin beektu garaa hirtee
Dubbii qara qabuun
Kokkee diinaa cirte…
ANAA HAA DHUFU!
Har’i guyyaa addaati. Artist Umar Suleeymaan ganama kana buufata xiyyaaraa #Booleetti simanna. Waaree booda Galma Barkumeetti sagantaa bashannanaa addaatu qophaa’ee jira. Irraa hin hafnu – hin hafiinaa!
Gadab jechuun Asaasa
Leenci keenna amma Finfinnee gayeera. Baga nagayaan geette. Umar Suleeymaan nama dhugaati. Dhugaa dubbata. Namni dhugaa akkanatti simatama. Jaalala dhugaa, kan nama dhugaatiif qaban suuraawwan kana irraa argitu. Dhugaan bakka isii hin wallaaltu. Namni cubbuu namarratti hojjate gaafa akkanaa qaanaya. Diinni salphisee biyyaa nu baase. Injifannoon qabsoo dhiiga ilmaan keenyaatiin argamte immoo kabajaan biyyatti nu galchite. Qe’ee keennatti mataa ol qabnnee akka gallu ni taasifte.
Kan kana wallaaletu Oromoo jeeqaara, Oromiyaa tasgabbii dhoorgaara. Namni waan dabre hin beekne waan boruu dhiisaa waan har’a keessa jiruyyuu hin beeku.
Umar Suleeymaan baga biyya teennatti nagayaan galte. Bookkisii, baroodii akka kee, injifannoofi dhugaa amma harkaa qabnu jabeessi.
Baga nagaan galate goota Oromoo ❤️💚❤️
Jiilli Bulchiinsa Godina Baalee kan Ibraahim Hajiitin durfamu hayyiicha Oromoo haftee Waaqoo Guutuu H/Aloo Aadam dabalate simanna goota keenya J.A Umar Suleeyman waliin baga gammadan baga gammanne baga wal argitan
Qophii Simannaa Artist Jeeneral Umar Suleeyman Galma Barkumeeti gegefama jiru Bakka Hayyoon gurguddoonif Itti gaafatamtooni Mootummaa argamanitiif bakka Qeerroo fi Qarreen argamanit gegeefamaara. Haali jiru hedduu nama gammachiisa. Gammachu Hawaassa keenya Rabbiin wolit nuuf Haa dhaabu . Injifannoo argane kunuunfata duratti tarkaanfachuun Dirqama lammii keenya hundaatti. Shiira fi Shari keessaf ala Rabbiin nuuf Haa didu !
Umar Rasaasa !
Tokkocha Qixxe kumaa !!!
Ani Haa Galu !
OBN Amajjii 05, 2011 – Sirna simannaa Artist Umar Suleeyman galma barkumeeti taasifama jiru eegale jira. OBNis tamsaasa kallattiin isinin biraan gahaa jira.
Seeneet Gizaachoo Galma Barkumeetti
ኤጄቶ አርቲስት ኡመርን ለመቀበል ከሲዳማ ተነስተው ሚሊኒየም አዳራሽ ተከስተው እንደዚህ ደስታቸውን እየገለፁ ነው
Umar Suleyman – Damma Makaa (Oromo Music)
OPDO’n Lafaa Saamtee FixnaanBaankii Maqaa WBO’n Saamuu egaaltee Ofeegaadhaa!! Dubbisaa BBCtu gabaase